ZTE Watch Live waa smartwatch cusub oo leh ismaamul ilaa 21 maalmood ah | Androidsis
ZTE Watch Live waa smartwatch cusub oo leh ismaamul ilaa 21 maalmood ah
Soosaaraha Aasiya ZTE ku soo bandhigaya mid cusub suuqa smartwatch-ka cusub ee Watch live smart watch, badeecad marka hore u taagan is-maamulkeeda. Isaga la mid ah Redmi daawasho, Qalabkan waxaa lagu daryeelay qaybtaas, oo ah qaabkii ugu dambeeyay.
Astaantu waxay ku jirtay suuqa smartwatch sanado badanWaxaa laga yaabaa inaysan ahayn tan ugu fiican, laakiin waxay ballanqaadaysaa mid si caddaalad ah u shaqeynaya oo qiimo jaban ah. Dabcan, waxay dhacdaa inay tahay ikhtiyaar xiiso leh haddii aad rabto inaad hadiyad riwaayad ah u sameyso Kirismaskan.
1 ZTE Toos u daawo, dhammaan wixii ku saabsan saacadda cusub
ZTE Toos u daawo, dhammaan wixii ku saabsan saacadda cusub
El ZTE Watch Live wuxuu ku darayaa 1,3-inch TFT dial ah oo lagu xallinayo 240 x 240 pixels, oo ku filan in la arko waxyaabaha ay shirkaddu ku jirto saacaddan, laakiin waxay u sii ekaan doontaa qorraxda. Waxay leedahay bar-kulanno la beddeli karo, waxayna sidoo kale ina tusi doontaa digniinaha shaashadda, farriimaha iyo ogeysiisyada.
Hawlaha kale waxaa ka mid ah cabbiraadda cabirka oksijiinta dhiigga iyo garaaca wadnaha, laba dhinac oo xisaabta lagu darayo, dhammaantoodna leh cabbir sax ah. Resistance waa nooca IP68 ee biyaha iyo boodhka, ku dar 12 hababka isboortiga, oo ay ku jiraan dabaasha, baaskiil wadista, barafka iyo banaanka oo lagu ordo.
Waxay uga sarreysaa dhammaan wixii madax-bannaanida laga bilaabo 14 illaa 21 maalmood iyadoo la adeegsanayo xeedho magneticQiyaas inaad ku shaqeyso wax ka yar laba saacadood muddo labo ama seddex toddobaad ah isticmaalka caadiga ah. Xarkaha ay adeegsadaan ZTE Watch Live waa kuwa ay isticmaalaan saacad kasta oo nuucaan ah waxaana loogu talagalay inay noqdaan kuwo aad u raaxo badan.
ZTE DAAWO LIVE
MUUQAAL 1.3 inch TFT oo leh 240 x 240 pixel resolution
BATARY Si loo xaqiijiyo
GUUD AHAAN Laga bilaabo 14 ilaa 21 maalmood
SENSORS Qiyaasta garaaca wadnaha / oksijiinta
SOFTWARE Nidaam lahaansho leh 12 nooc oo isboorti ah
Isku xirnaanta Bluetooth 4.2
ISKU DUWAN Android 5.0 ama ka sareeya
Qiyaasaha iyo Miisaanka: 40.6 x 34.6 x 10.8 mm /
El New ZTE Watch Live ayaa la iibin doonaa bisha Diseembar 3 gudaha Shiinaha, in kasta oo soo saaruhu uu horay u sheegay inuu doonayo inuu ka billaabo dhulal kale laga bilaabo 2021, in kasta oo iibsashadiisu ay suurtagal ka tahay dukaanka ZTE. Qiimaha Watch Live waa qiyaastii 229 yuan, oo sicirka sarrifka uu ku dhow yahay 29 euro.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Smartwatch » ZTE Watch Live waa smartwatch cusub oo leh ismaamul ilaa 21 maalmood ah
Sida loo qaato shaashad buuxda oo WhatsApp ah
Huawei P40, P40 Pro iyo Mate 30 Pro waxay helayaan cusbooneysiin EMUI 11 ah